Semalt Expert: Sei Kuongorora SEO Performance
Vakawanda ve-e-commerce mamenenja vane hanya nezvinhu. Vanogara vachitsvaga paGooglepane chimwe chinhu chinoratidza kuti maitiro avo ari nani. Pavanoona kuchinja mumigumisiro yekutsvaga injini, vanofunga kuti ivosearch engine optimization (SEO) chirongwa chekuita hachina chakanaka. Zvinosuruvarisa, izvi hazvisi chokwadi nguva dzose - web design develop.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Services, inotsanangura zvinhu chaiyo zvinoita kuti webhusaiti yako iite uye inoshanda.
Kumupikisana: Ndezvipi zvakare zvakasarudzwa?
Mazuva ano kukwikwidzana kwave kwakangoerekana kwakagadzirwa nemaitiro ekugadzirwa kwezvinhu zvinoshandiswa necompetitors. Chero ega yekambani yekambani yekambani anoda nzvimbo iyi kubuda kunze kwevanoshambadzira bhizinesi kuitira kuti vawedzere kuonekwa, edza kuvharidza uye kuitaa sale. Zvisinei, mibvunzo yakawanda yekutsvaga yakagadzirirwa zvikamu mumigumisiro yekutsvaga inoita kuti kurege kutariswa kubva kune zvakasikwa zviwanikwa zvehupenyu uye kusundirakunyorera pasi peji.
Kuzviisa pasi: Ndiani ari kuisa?
Nhasi, zvikwata zvakanyatsogadziriswa kusvika pamwero wakanga usisati wapihwarankings for most searches. Chaizvoizvo, nhaurwa iyo mutengi anoona pa iPhone yake ichave yakasiyana neyekutsvaga kwaunoona pane tablet yako kanakombiyuta. Somugumisiro, hapana munhu angamboti nechivimbo "Tinotanga kutanga kuGoogle!"
Kazhinji, zvikwata zvinoshandiswa zvichibva pa:
Nzvimbo. Ichi ndicho chinonyanya kukosha chinoita kuti munhu aite zvakaenzana.Apo injini yekutsvaga ichitsvaga nzvimbo yemushandisi achishandisa sekiini yesero kana kero ye IP yedhi, vanoendesa mitsva yekutsvaga yakawanikwa.
kushandiswa kwedhidhiyo. Nhamba dzinoonekwa pafoni dzefoni hazvifanani neaya anoonekapane pakombiyuta kana piritsi. Zvigadzirwa zvefoni zvinowanzowana hukama muma apps. Somugumisiro, nzvimbo dzakasangana neshamwari dzakashamwaridzana dzichava dzakakwirira..Kana amutengi ari kutsvaga chimwe chinhu pane iPhone, zvigumisiro zvichave zvakasiyana zvikuru nezvinoonekwa pamakombiro edesktop yako.
Tsvaga nhoroondo. Nguva dzose paunopinda mubhuku rekutsvaga injini, injini yekutsvagainosvika pane zvose zvese zvekutsvaga. Muenzaniso wakakwana ndewe paunopinda mubhuku rako re Gmail pane kombiyuta yako, injini yekutsvaga yakaiswa mukatiGoogle account yako neGoogle kutsvaga. Aya mashoko anoshandiswa kuisa mhinduro yemigumisiro yekutsvaga iri kudivi yako.
Social behavior. Kushandisa zvikwata zvakadai se Twitter uye neGoogle, Google inowana ruzivo rwakakwanakune mararamiro ako evanhu. Izvi zvinotsanangura kuti nei zvimwe zvinyorwa kubva mumagetsi kana shamwari zvinoratidzwa mumigumisiro yenyu yekutsvaga, asi haisi kuratidzwa apo imwevanhu vanotanga mibvunzo yekutsvaga
Nhamba dzevanhu. Tsvaga injini inogovera mushumiri wese muboka revanhu vachishandisa ivomararamiro apfuura kuti ataure zvakanyanya kutengesa zvikwata.
Kubva pane zvinhu zvinotaurwa pamusoro apa, iwe zvino unonzwisisa kuti kutsvakurudza injini yekutsvaga kwakadiniyakagadzirirwa. Zvinhu izvi zvinopa chikonzero chekuti nei kushandiswa kwemapurisa zvigadzirwa zvingave zvingadzokorora zvinyorwa zvemutengi wevatengi kunyange kana iwe unotarisazvishandiso zvinoratidza kuti iwe uri wekutanga kune wezwi rako rinokosha zvikuru. Chiitiko chingave chisingaone zvakafanana kubva pakuguma kwavo zvinoreva kutihavangatengi kutenga kubva kwauri. Izvi zvinoreva kuti kana chikwata chekupa ruzivo chisingakwanise kupa durama rakarurama kuti ibatsire bhizinesi rako kuunza mari, ipapohaisi chivimbo chakavimbika chinoratidza utano.
Mumiririri: Ndeapi mazwi makuru ekusarudza?
Kufambisa tsananguro kunoreva kuti unosarudza seti yemitsara uye mazwi makuru ayo waunodasarudza uye kuronga kushanda kwewebsite yako panzvimbo yekutaura kwemashoko iwayo. Mitsara yaunosarudza inogona kuchinja kuonekwa kweyour performance.
Nyaya zhinji, makambani anoona zviri nyore kushandura mazwi nemashoko makuru avo vatovenzvimbo yekubatanidza mazita avo kana mazwi nemakwikwi akaderera. Izvi zvinowanzoita kuti zvioneke sekuti SEO yavo inoshanda haina chaipo kunyange kanahazvisi.
Kune rumwe rutivi, mapeji ega ega anogona kuenzanisa zviuru zvemashoko ane zvishomazvinoda. Izvi zvinovakirwa pamusana pezvinyorwa zvemashoko akawanda anomiririra 1,5,15 kana 60 ekutsvaga mwedzi wese izvo zvose zvinowedzera kukwira motokari zvichienzaniswa neyakakosha-key keywords iwe unotora muhutori hwehuwandu hwehuwandu. Kuchengetedza mazwi ako aunofunga sekuti kukoshesa kwakakura kunokusiya iwe upofu kune simba rakavanzwawekutsvaga muswe mutsva.
Chimiro: Yakaratidza rini?
Nhamba dzechikwata dzakanyatsoshandiswa uye dzinotyisa. Somugumisiro, unogona kutsvaga zvaunodakeywords uye vanoziva kuti haisi yekutanga kutanga zvakare. Zvisinei, iwe unogona kuwana kushamiswa kunonakidza kuona iyo inotanga iwe nguva inotevera kana iwe uchitsvaga.